IUCN ကမ္ဘာ့ထိန်းသိမ်းရေးကွန်ဂရက်၊ ရေရှည်တည်တံ့သောလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်
ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » တာဝန်ရှိသော » IUCN ကမ္ဘာ့ထိန်းသိမ်းရေးကွန်ဂရက်၊ ရေရှည်တည်တံ့သောလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်
ဥရောပသတင်းများ • နိုင်ငံတကာသတင်းများ • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • စီးပွားရေးခရီးသွား • ပြင်သစ်အထူးသတင်း • သတင်း • တာဝန်ရှိသော • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • ယခုခေတ်စား
IUCN ကွန်ဂရက်အဖွင့်၌ပြင်သစ် ၀ န်ကြီးချုပ် Macron စကားပြောနေစဉ်
COVID-19 အကျပ်အတည်းကြောင့်မူလရည်ရွယ်ချက်ထက်တစ်နှစ်နောက်ကျသော၎င်း၏သဘာဝပတ် ၀ န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ (IUCN) သည်ယခုအပတ်တွင်၎င်း၏လေးနှစ်ပြည့်ကမ္ဘာ့ထိန်းသိမ်းရေးကွန်ဂရက်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်သည်။
၎င်းသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ Marseille တွင်ကျင်းပသော ၉ ရက်တာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသမဂ္ဂညီလာခံအတွက်ပြည့်ဝ။ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
စိတ်အားတက်ကြွမှုနှင့်အားဖြည့်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဤကာလအတွင်းကျင်းပခဲ့သည့်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ၄ ခုရှိသည်။
တင်ပြခဲ့သည့်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ၄ ခုမှာ - ဌာနေတိုင်းရင်းသားများထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူငယ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အစည်းအဝေးနှင့်ပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှုထိပ်သီးအစည်းအဝေးတို့ဖြစ်သည်။
၉ ရက်တာညီလာခံကျင်းပစဉ်အတွင်း IUCN အဖွဲ့ဝင်များသည်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသောအချက် ၃၉ ချက်ဖြင့်မဲပေးခဲ့ကြသည် ခေါင်းဆောင်မှုအသစ်နှင့် ၂၀၂၁ မှ ၂၀၂၄ အတွက်နောက်ထပ် IUCN အစီအစဉ်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည် သဘာဝ ၂၀၃၀ - လုပ်ဆောင်မှုအတွက်ပြည်ထောင်စုမရ။ ထိုအချိန်တွင်သီးခြားထိပ်သီးအစည်းအဝေး ၄ ကြိမ်ကျင်းပခဲ့သည် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများထိပ်သီးအစည်းအဝေး, အ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူငယ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး, အ CEO Summit, ပြီးနောက် ပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှုထိပ်သီးအစည်းအဝေးIUCN နှင့်အတူလုပ်ဆောင်နေသောအဖွဲ့အသီးသီးအားလှုံ့ဆော်အားဖြည့်ရန်နှင့်အားဖြည့်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
Motion3- Climate Change Commission (သို့မဟုတ် Global IUCN Climate Crisis Action Platform) နှင့် Hawai'i Conservation Alliance Foundation နှင့် Our Drowning Voices တို့မှကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ IUCN ရာသီဥတုအကျပ်အတည်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအစည်းအဝေးကို EcoGo တက်ရောက်ခဲ့သည်။ Motion 003-သဘာဝနှင့်လူတို့ရှင်သန်ကြီးထွားရန်လိုအပ်သောအထောက်အထားများကို အခြေခံ၍ နယ်မြေအခြေပြုထိန်းသိမ်းရေးပစ်မှတ်များသတ်မှတ်ခြင်း၊ နှင့်လှုပ်ရှားမှု ၁၃၀ - ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ရပ်ရွာကြံ့ခိုင်မှုအတွက်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ Streng ကိုအားဖြည့်ရန် WCPA ၏ (IUCN အတွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းကော်မရှင်) နှင့်အကာအကွယ်ပေးရေးအထူးအဖွဲ့တို့ကအဆိုပြုထားသည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်မြင်နိုင်သည့်အတိုင်းကျော်ဖြတ်ခဲ့သည် မဲရလဒ်များ.
Aix en Provence ရှိ Pamela
Motion 130 သည်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုခေါင်းစဉ်တစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီး၍ သဘာဝအခြေခံခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်ရပ်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုအနာဂတ်ကွန်ဂရက်များနှင့် IUCN ကွန်ဖရင့်များတွင်ပေါင်းစပ်ပြီး၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောခရီးသွားလုပ်ငန်းအခန်းကဏ္bနှင့်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ရပ်ရွာခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့ကို ဦး တည်သော inter-commission working group တစ်ခုဖန်တီးရန်တောင်းဆိုသည်။ သူတို့၏အနာဂတ်ကြိုးပမ်းမှုများတွင်ရေရှည်တည်တံ့သောခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုထည့်သွင်းရန်အခြားကော်မရှင်များ WCPA နှင့်ပူးတွဲပံ့ပိုးကူညီသူများအားလုံးသည်ဤအတွက်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြသည်။
Motion 101 သည်ထုတ်လုပ်ရေးတွင်အချိန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး Vance Martin နှင့်သူ၏အဖွဲ့၏မဆုတ်မနစ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကြောင့်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အဖြစ် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည်လုပ်ဆောင်မှုအတွက်လုံးဝမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဤအရာသည်သဘာဝကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်သောလမ်းညွှန်ချက်များဖြစ်သည်။ ရှင်သန်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
CEC ညစာစားပွဲတွင် Jehoshua Shapiro, Jessica Hughes နှင့် Pamela Lanier
Motion 003 သည်အလွန်အငြင်းအခုံဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပြုသူများသည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကော်မရှင်ကိုဖန်တီးလိုသည်၊ သို့သော် IUCN ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့၏ပြန်လည်တည်းဖြတ်မှုတွင်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုကော်မရှင်တစ်ခုထက်မကဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထိုပြောင်းလဲမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏နစ်မြုပ်နေသောအသံများတုံ့ပြန်မှုကိုဖတ်ပါ ဒီမှာ. ထို “ IUCN Climate Crisis Action Platform” ကိုတည်ထောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကော်မရှင်တစ်ခုအားထပ်မံတည်းဖြတ်ခြင်းဖြင့်ဘာသာစကားပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၈ ကြိမ်မြောက်အပြီးသတ်အချေအတင်ဆွေးနွေးမှုနှင့်မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုကိုအတည်ပြုခဲ့သော်လည်းမည်သည့်ပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်မည်ကိုမသိရသေးပေ။
IUCN သည်လည်းသဘောတူသည် စာတမ်းအသစ် လာမည့်လေးနှစ်တာကာလအတွက် COVID-19 ပြန်လည်နာလန်ထူရေးနှင့်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများဆုံးရှုံးမှုကိုရပ်တန့်ရန်။